Archive du 20200701
Mpiasan’ny fahasalamana Tsy ampy fitaovana, atahorana hitokona
Manoloana ny fahafatesana nanjo ny mpiara miasa noho ny COVID ; namana marobe mpiara-miasa voatily fa mitondra ny COVID-1, fitomboan'isan'ireo mpiray tanindrazana voa,
Naina Andriantsitohaina Nosalorany tamin’izay mampety azy ny samboady
Tranga telo no voamariky ny maro tamin’ny fiseho sy fihetsik’i Naina Andriantsitohaina, Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra nanodidina ny fankalazana ny tsingerintaona faha-60 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara.
Vaky fanasana tany Tolagnaro Lavaka 8 no namoahan’ireo mpanao ratsy ny razana
Nitrangana vaky fasana tany amin’ny kaominina ambanivohitra Soanierana, distrikan’i Tolagnaro andro vitsy lasa izay. Lavaka manodidina 8 isa no hita fa nisokatra ka ireo taolana tsy nilain'ireo mpanao ratsy dia naparitany teo an-tokontany avokoa.
Fitsarana Hiditra hiasa avokoa ireo sampam-pitsarana rehetra
Hiditra hiasa avokoa ireo sampam-pitsarana rehetra manerana ny Nosy. Hisy valandresaka ho an’ny mpanao gazety ho fampahafantarana izany, hotanterahina ao amin’ny trano famakiambokin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany
Malagasy mihitsoka any Frantsa Mangataka ny fampodiana azy ireo
Hisy sidina manokana hitatitra ireo teratany frantsay mihitsoka eto Madagasikara ny 07 jolay izao. Ireo orinasa misehatra amin` ny fizahan-tany “Wamos Air” sy “Aventour Madagascar”
Village Voara Andohatapenaka Hisokatra anio ny ivon-toerana Covid 19
Natao hikarakarana manokana na amin'ny alalan'ny fitiliana na fitsaboana ireo olona mitondra ny soritr'aretina Covid-19 ny Village Voara Andohatapenaka. Ivo-toerana iray handraisana olona manana ahiahy amin’ny aretina izy io ary afaka mandeha eny avokoa ny olona rehetra.
Mampivarahontsana ny taham-pahavoazana 76 tamin’ny fitiliana 148 voan’ny coronavirus
Niampy 76 ireo mararin'ny coronavirus eto amintsika, araka ny tatitra nataon’ny Pr Vololontiana Hanta omaly.
CVO hosoka naparitaka Anio ny fitsarana any Toamasina
Olona 11 no voarohirohy tamin’ilay afera famokarana sy fivarotana Tambavy CVO hosoka na tsy ara-dalàna tany Toamasina. Nanamafy ny fisian’io ny mpandrindra nasionalin’ny CCO Covid-19 Jeneraly Elack Olivier Andriankaja. Ny 24 jona
GEL hampiasain’ny taxibe Efa niezaka ny mpitatitra teny am-piandohana saingy …
Ratsy ny miditra fonjakely na “violon” hoy Randriamiarisoa Jean Harilanto, filohan’ny Fitaterana Mirindra na ny FMA omaly raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety izy.
Andry Rajoelina “Tsy voan’ny coronavirus izany aho”
Nitsidika ilay ozinina mpamokatra fanafody na ny “Pharmalagasy” eny Tanjombato ny Filoha Rajoelina mivady omaly, nijery ny fametrahana ireo milina hampiasaina.
Ady amin’ny COVID 19 Ny ezaka hataon’ny tsirairay ihany no hampidina ny isa
Feno 100 andro omaly ny nanambarana tamim-pomba ôfisia ny fisian’ny tsimok’aretina COVID eto amintsika. Tsy nitsaha-niakatra ny salan’isan’ireo olona voa nandritra izany izay efa tafakatra 90 mahery isan’andro mihitsy indraindray.
Afa-miaina 3 andro ny otrikaretina covid-19 Fihetsika kely tsy voatandrina dia mety hampidi-doza
Ambony be ny risika hiparitahan’ny valanaretina coronavirus, na eo aza ny fepetra raisin’ny fitondram-panjakana amin’ny fanenjanana ny fampiharana fepetra. Tsy sarotra ny miaro tena, saingy zavatra kely tsy voatandrina ihany koa dia mety hampidi-doza.